Ihe ị ga-ahụ na agbataobi Cimadevilla na Gijón | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | General, Gijón
El Agbataobi Cimadevilla dị na obodo Gijón na ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ezigbo na anyị nwere ike ịga. Ọ bụrụ na anyị ga-aga obodo Astur a, anyị ga-agabiga mpaghara ya a ma ama, nke jupụtara na ebe ndị mara mma na nnukwu ikuku, ọkachasị n'oge dị elu. Ọ bụ ya mere ọ ji bụrụ ebe dị mkpa mgbe ị na-eleta Gijón.
Ọ bụrụ na ị ga-ahụ ndị Obodo Gijón ị ga-agabiga na mpaghara a, àmà nke ụdị ihe omume niile. Ọ bụ nke kasị ochie na obodo ahụ ma ama otu esi emegharị oge ọhụrụ. Taa, anyị hụrụ mpaghara jupụtara na ndụ kamakwa ọ nwere amara pụrụ iche.
1 Otu esi aga mpaghara Cimadevilla
2 Akụkọ banyere Cimadevilla
3 Cerro de Santa Catalina na Otuto nke Horizon
4 Mgbidi Roman na baths
5 Revillagigedo Obí
6 Ebe ọmụmụ Jovellanos
Otu esi aga mpaghara Cimadevilla
Agbataobi a dị n’obodo Asturia dị na Gijón, nke enwere ike iji ụgbọ ala ga-adị mfe. Agbata obi dị na Santa Catalina peninshula na ọ dị mfe ị ga-aga chọta ya, ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịgbaso njem ahụ site n'ụsọ osimiri na lee na njedebe nke mpaghara Cimadevilla. Enwere ọtụtụ ogige ntụrụndụ dị nso na ụfọdụ na mpaghara Cimadevilla, mana ọ ka mma ịhapụ ụgbọ ala gị na mpaghara ọhụrụ wee jee ije. Ya mere, anyị nwekwara ike ịhụ akụkụ nke oge a nke obodo na osimiri, nke mara ezigbo mma ma nwee obosara ebe ị ga-aga.
Akụkọ banyere Cimadevilla
Cimadevilla bụ agbata obi kacha ochie na obodo a ma ọ dị na ugwu nwere mgbidi. N'ugwu a bụ ụlọ ụka nke 'Guild nke Mareantes de Santa Catalina', nke kacha ochie n'obodo ahụ. Na narị afọ nke iri na asaa, e buliri ugwu ndị agha iji chebe obodo na ụsọ oké osimiri pụọ na mwakpo ndị ohi site na oké osimiri. Bụ a ebe enwerelarịị ọnụnọ nke ndị Rom, nke na-enye anyị echiche nke ịdị mkpa dị mkpa n'ihi ọnọdụ anụ ahụ na-eche ihu n'oké osimiri na n'ugwu nke dịpụrụ adịpụ site na ịrị elu ebili. Na narị afọ nke XNUMX, e wuru ọdụ ụgbọ mmiri azụmahịa nke mere ka nkewapụ a kwụsị ma gbanwee mpaghara a ka ọ bụrụ ebe obibi nke ndị ọrụ ụgbọ mmiri na ndị ọkụ azụ, dịka a maara ya taa, dị ka agbata obi ndị ọkụ azụ azụ ochie, nke bụ isi ahịa n'obodo ahụ. N'ime iri afọ ndị gara aga, e megharịrị mpaghara a ma nwee mkpa maka akụkọ ihe mere eme ya. A rụzigharịla ụlọ wee meziwanye ọbịbịa ha n'ihi na ọ bụ ebe ndị njem na-aga eleta.
Cerro de Santa Catalina na Otuto nke Horizon
Ugwu Santa Catalina bụ ubi ubi mara mma taa nke ọma maka ịga ije na ebe ị ga-ahụ ndị mmadụ na-eme egwuregwu ma ọ bụ na-agagharị anụ ụlọ ha. Ugwu a na-enye anyị nnukwu echiche nke obodo ahụ, dịka ọ dị na mpaghara ka elu, yana oke osimiri na mmiri. Na mpaghara ebe a bụ ebe anyị nwere ike ịchọta ọrụ ama ama nke Chillida akpọrọ Elogio del Horizonte. Ọ bụ nnukwu ihe ọkpụkpụ, nwere akụkụ dị ịtụnanya e wuru na mpaghara 1990. Ọ bụ ihe ọkpụkpụ nke na-eme ka akụkụ ochie nke obodo ahụ dị ugbu a na na mgbakwunye na inwe ọnụnọ dị ukwuu na-eweta ụda n'ihi ikuku, ihe dị pụtara ìhè.
Mgbidi Roman na baths
Obere ihe foduru nke ndị Rom na mpaghara Cimadevilla, mana anyị ka nwere ike ịchọta foduru nke ebe ịsa ahụ ndị Rom oge ochie nke Campo Valdés. N'ebe ọwụwa anyanwụ a chọtara ebe ihe ochie na mmalite narị afọ nke XNUMX mana ọ gaghị alọghachikwute ya ruo mgbe agha obodo gachara na n’afọ XNUMX. Taa, anyị nwere ike ịhụ akụkụ nke ebe ịsa ahụ ndị Rom rụrụ na XNUMX narị afọ nke XNUMX na mgbidi nke obodo ochie.
Na nke ochie a nke obodo e nwekwara ohere maka ụfọdụ obí eze dị ka Revillagigedo, makwaara dị ka Obí nke Marquis nke San Esteban de Natahoyo. Obí eze a dị n’akụkụ marina nke obodo ahụ ugbu a. Ọ bụ ezigbo ihe atụ nke Asturian palatial architecture nke narị afọ nke XNUMX. Ọ nwere ụdị mara mma mara mma na ụlọ elu abụọ na-enweghị atụ, nke nwere ọta mkpuchi n'ihu facade. Chalọ ekpere a na-agbakwunye bụ Collegiate Church nke San Juan Bautista, nke e wuru n'ụdị Baroque ma wuchaa afọ ole na ole ka eze gasịrị. Ha abụọ na-eme nke ọma na obodo ochie.
Ebe ọmụmụ Jovellanos
Nke a Amụrụ ụlọ amụrụ dịka Jovellanos Museum. Ọ bụ ụlọ mara mma nke sitere na narị afọ XV nke ezinụlọ Jovellanos. O nwere ụlọ elu abụọ dị n'akụkụ ya na ụlọ ekpere agbakwunyere. A na-akpọ square nke dị n'ihu ụlọ ahụ Plaza de Jovellanos. N’ebe ngosi ihe mgbe ochie ị nwere ike ịhụ ụlọ ndị a raara nye ndụ Jovellanos. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike ịhụ ọnụ ụlọ ụfọdụ iji nwee ekele maka ọrụ ndị ọrụ Asturian rụrụ na narị afọ nke XNUMX.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na agbataobi Cimadevilla